Izibane ezikhusela uqhushumbo kunye nezibane Abavelisi-iTshayina izibane ezingaqhushumbayo kunye nezibane Ababoneleli & neFactory
Uluhlu lwe-MSL4700 lwe-Multifunction pocket-proof-proof lights
2. Ifanele indawo yerhasi eqhumayo kwindawo engu-0, indawo 1, indawo yesi-2;
4. Ifanele indawo yothuli oluvuthayo kwindawo ye-20, 21, 22;
I-JM7300 series Miniature-proof-proof flashlight
Uluhlu lwe-IW5510 oluphathekayo olunoqhushumbo-ubungqina bezibane zokuhlola umsebenzi
Uluhlu lwe-IW5130/LT oluncinci lwezibane ezibonisa ukuqhuma
1Isetyenziswe ngokubanzi ekuhloliseni i-oyile, ukucokiswa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile angaphesheya, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokuhlola kunye neenjongo zokukhanyisa ezihambayo;
2 .Ifanele indawo yerhasi eqhumayo kwindawo 1, indawo yesi-2;
3 .Umoya oqhumayo: iklasi ⅡA,ⅡB, ⅡC;
4 .Ifanele indawo yothuli oluvuthayo kwindawo ye-22, 21;
5 .Ifanelekile kwiimfuno zokhuseleko oluphezulu, iindawo ezimanzi.